KGS waxa ay u af-duuban tahay Farmaajo - Xuseen Sheekh | KEYDMEDIA ENGLISH
KGS waxa ay u af-duuban tahay Farmaajo - Xuseen Sheekh
Wuxuu is weydiiyay sharafta iyo midnimada laga raadinayo dhowr-kan kursi, oo dalka oo dhiban dhibaato u keeni kara, xilli la xasuusto in Lafatagareen, uu sharaf dil ku sameeyay mas'uuliyiintii hore ee reer Koofur Galbeed, sida; Maxamed Sheekg Cusmaan [Jawaari] iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan?
MUQDISHO, Soomaaaliya - Senator Xuseen Sheekh Maxamuud, oo ka mid ahaa Baarlamaankii 10-aad ee JFS, dhawaanna uu Lafta-gareen ka hor istaagay u baratanka kursigii uu ku fadhiyay, ayaa sheegay in guud ahaan maamulka Koonfur Galbeed, shacabka iyo gaar ahaan Xildhibaanada cusub u afduuban yihiin oo madax furasho u haysta Madaxweynihii hore Farmaajo.
Wuxuu xusay in Farmaajo ka quustay dib ugu laabashada Madaxtooyada haddii doorasho la aado, isla-markaana uu aamini waayay Xildhibaanadii intooda badan uu talada ku lahaa soo saaristooda, taas oo sababtay inuu KG, u isticmaalo kaarkiisii u danbeeyey oo uu ku carqaladeynayo dadaallada lagu dhameystirayo hannaanka doorashooyinka.
Xuseen Sheekh, wuxuu tilmaamay in Farmaajo, doonayay in dhamaan Maamul Gobolleedyada, sidda KGS, ugu hoggaansamaan, una dulleysnaadaan, si uu u hirgaliyo dhamaan danihiisa siyaasadeed ee gaarka ah, hayeeshee, qorshahaas gurracan ay ka hor yimaadeen inta badan madaxda Maamul Gobolleedyada dalka.
“Arrinta marmarsiiyada looga dhigayo xildhibaanada cusub ee la leeyahay midnimadiina ilaashada ee walaalaha kuraastooda la xanibay midnimo u muujiya waa sabab aan gaarsiisneyn in dalka oo dhan loo hor istaago doorashadiisa qalalaasena loo geliyo”. Ayuu yiri Xuseen Sheekh.
Wuxuu sheegay in kuraasta muranku ka jiro ee Sadexda ah, lagu xallin karo si fudud, haddii aaney xujo jirin, sidii loo xaliyey 2016, markaas oo KGS, muran laga geliyey Sagaal kursi, hayeeshee, la xalliyey, waxaana xusid mudan in 2016 uu Laftagareen qaatay shahaadada xildhibaannimo, xilli Sagaal kursi KG, lagu celiyay.
"Maxay tahay midnimada reer KG ee la doonayo ayadoo shacabkii oo dhan loo afduubey loona dulleeyey sidii uu nidaamkan Farmaajo ee dhibaatada biday uu xukunka ku joogi lahaa? Maanta ma waxaan midnimo iyo karaamo dhahnaa in xildhibaanadii KG ay u afduuban yihiin Farmaajo"? Ayuu ku sii daray.
Xildhibannada laga soo doortay maamulkaas, ayuu ku war galiyay in ay ka xoroobaan hugashada iyo hoos fiirinta, iskana diidaan in ay u af-duubnaadaan 16-ka kursi ee Gedo taalla iyo kursiga uu Fahad Yaasiin doonayo in xoog loogu xalaaleeyo, wuxuuna kula taliyay in aan loo adeegsanin in dalku mar kale uu fowdo dib ugu noqdo.